IE မှာ Myanmar font မတက်လို့ — MYSTERY ZILLION
IE မှာ Myanmar font မတက်လို့
IE မှာ Zawgyi one တင်ထားပေမယ့် မြန်မာဖောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာပေါ်ပြီး အတုံးလေးတွေပဲပေါ်တဲ့နေရာ ပေါ်နေလို့ လုပ်ကြပါဦး:77::77:
copy the above code n paste in the notepad.Save it " ie.css" . Go to IE Tools--> Internet Options --> General tab -->Accessibility -->check the " Format documents using my style sheet" Under the User style sheet and Browse the just save file known as " ie.css" .
:5:IE ကိုဖွင်.ပြီးရင် ဒီအတိုင်းသွားလိုက်ပါ ။ Tool >> Internet Option >> General >> အောက်နားမှာ Font >> ပြီးရင် Zawgyi one ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ၊ ညီလေးစက်မှာ Zawgyi Font တော.ရှိရမှာပေါ.။ အဆင်ပြေပါစေ :5:
ှုIE မှာ မြန်မာလိုတွေ ပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့.. Gmail မှာရော ၀က်ဆိုဒ် တွေ မှာရော မြန်မာလို ပေါ်စေချင်တယ် ဆို၇င်တော့....
Internet Explorer ကို ဖွင့် ပါ။ ပြိးတော့ Tools Menu ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ Internet Options ကို နှိပ်လိုက်ရင် Box လေး ကျလာ တဲ့ ခါ
အောက်နားလေး က Accessibility ကိုနှိပါ ။ ပြီးတော့ Formatting ရဲ့အောက်မှာ Box လေး သုံး ခုထဲက ဒုတိယမြောက် က
Ignore font styles specified on webpages ကို တစ်လေး ပေး လိုက်ပါ ပြီးတော့ အဲဒီအာက်နား ကပဲ User style sheet အောက်က box ကိုလည်း တစ်လေး ပေး လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီဘေး နား က Browse ကိုနှိပ်လိုက်ရင်...C: drive ထဲက Alpha Zawgyi ထဲက ie ကို နှိပ်ပြီး open လုပ်လိုက်ရင် box အဖြူလေး ထဲမှာ ဒါမျိုးလေး တွေ့ပါလိမ့်မယ် C:AlphaZawgyi\_ie.css
အဲဒါတွေ ပြီးရင်...OK....OK ပေး လိုက်ရင် ကိုယ့်အီးမေး ထဲ က မြန်မာလိုရေး ထားတဲ့စာတွေ အကုန်လုံးမြန်မာလိုမြင်ရပါပြီဗျာ....။
အဲ... ထပ်ပြောအုံးမယ်.. အဲဒီလို လုပ်လိုက်ရင်.. မြန်မာတိုငး် ဂျာနယ် ဖတ်ရင်.ဖတ်လို့ မရပြန်ဘူးဗျ...ဒါ့ကြောင့်..
မြန်မာ တိုင်း ကို မြန်မာလို ဖတ်လို့ ရအောင် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စောစော က အပေါ် မှာ ပြော ခဲ့တဲ့ တစ်စ် လေး တေွ ကို ပြန်ဖြုတ်ပေး လိုက်ရင် မြန်မာလို ဖတ်လို့ ရသွား ပြန်ပါတယ်ဗျာ............အဆင်ပြေပါစေဗျာ...
Thank you zawtk